Robert Mugabe oo Is Casilay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Harare(FMN)—Madaxweynihii muddada dheer soo hayay hoggaanka ugu sareeya ee dalka Zimbabwe;Robert Gabriel Mugabe ayaa goor dhaw ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynimo ee dalkaasi Zimbabwe.
Mugabe ayaa iscasilay kadib markii ay Xubno katirsan Militariga dalkaasi soo faragaliyeen siyaasada dalka,islamarkaana ugu baaqeen 93 jirka 37da sanno ku fadhiyay kursiga Madaxweynenimo ee dalkaasi inuu si nabad ah shaqada uga tago.sidoo kale xisbiga ZANU-PF ee uu hoggaaminayay Mugabe ayaa iyagu ka xayuubiyay xilkii Guddoomiyenimo iyaga oo codsaday inuu iscasilo ama wajaho xilkaqadis qasab ah oo uu baarlamaanka dalkaasi ku sameeyo.
Sikastaba ha ahaatee,is casilaada Mugaabi oo ah Madaxweynaha kali ah ee uu dalkaasi Zimbabwe yeeshay tan iyo markii uu xoriyada qaatay ayaa kusoo aadaysa xilli uu dalkaasi la daalaa dhacayo dhaqaale xummo iyo cunaqabatayn caalami ah oo saaran,iyada oo in badan oo kamid ah dadka wadankaasi udhashayna ay uhayaameen dalka deriska ah ee Koonfur Afrika si ay uga helaan nolol dhaanta midda taala dalkooda.
Ilaa iyo hadda lama hubbo cidda bedeli doona madaxweynaha is casilay,balse waxaa loo badinayaa in uu xilkaasi qaban doono madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi oo uu dhawaan shaqada ka eryay madaxweyne Mugaabi.
Previous Previous post: Muuse Biixi:Madaxweynaha Cusub Ee Somaaliland.
Next Next post: Madaxweyne;Farmaajo Oo U Hambalyeeyay Madaxweynaha Cusub Ee Soomaaliland.